Galmudug oo sheegtay inay la wareegeen degaanka Camaara - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Galmudug oo sheegtay inay la wareegeen degaanka Camaara
Galmudug oo sheegtay inay la wareegeen degaanka Camaara
Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa sheegay inay la wareegeen Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Daraawiishta Galmudug degaanka Camaara ee Koonfurta Gobolka Mudug, halkaas oo ay in muddo ah gacanta ku hayeen Al-Shabaab.
War kasoo baxay Wasaaradda Amniga Galmudug ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada huwanta ah ay hadda gacanta ku hayaan degaanka Camaara, isla markaana ay howlgallo ka wadaan.
Sidoo kale Galmudug ayaa sheegay in saacadba saacada ka dambeeysa ay Al-Shabaab, isaga baxayaan degaano horleh kadib markii Ciidamada dowladda iyo kuwa Galmudug ay kordhiyeen howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab.
Saaka ayay aheyd markii Ciidamada dowladda iuo kuwa Galmudug markii ay howlgal kula wareegeen degaano duleedka la xiga degaanka Qaycad, halkaas oo shalay duqeyn uu Mareykanka ka fuliyay, kadibna ay Ciidamada huwanta ah howlgal lug ah ku galeen.
Previous articleGalmudug iyo QM oo ka wada hadlay Arrimaha doorashooyinka
Next articleCabdi Xaashi oo Rooble u gudbiyay qodobo xal u noqon kara khilaafka Siyaasiyiinta Gobolada waqooyi